I-Chief Executive Officer yesizwe
UMongameli we-United States okanye "i-POTUS" imisebenzi njengeNtloko ye-United States. UMongameli ulawula ngqo onke ama-arhente agatsha elilawulayo likarhulumente kwaye uthathwa njengomlawuli oyintloko yamasebe ase-United States.
Amagunya okulawula kaMongameli achazwe kwiSiqendu II somgaqo-siseko wase-US. UMongameli ukhethwe ngokuchanekileyo ngabantu ngokusebenzisa inkqubo yekholeji ukuya kwithuba eliyiminyaka emine.
Umongameli kunye nomongameli wee-ofisi kuphela ezikhethiweyo zikarhulumente kwi-federal government.
UMongameli angasebenzisa ngaphezu kwemibini emine yemigangatho. IsiLungiso samaBini angamashumi amabini anesihlanu siyakwenqabela nayiphi na umntu ukuba atyunjwe umongameli kwikota yesithathu kwaye angavumeli nawuphi na umntu ukuba atyunwe ukuba abe ngumongameli ngaphezu kweyodwa ukuba lowo mntu wayekade engumongameli, okanye umongameli osebenzayo, iminyaka engaphezu kwemibini yomnye umntu ixesha lokuba ngumongameli.
Umsebenzi oyintloko womongameli waseUnited States ukuqinisekisa ukuba yonke imithetho yase-US iyenziwa kwaye ukuba urhulumente wephondo usebenza ngokufanelekileyo. Nangona umongameli akanakho ukuvelisa umthetho omtsha-lowo ngumsebenzi weCongress - usebenzisa amandla okuvota phezu kwazo zonke iindleko ezivunyiweyo yowiso-mthetho. Ukongezelela, umongameli unendima ebalulekileyo yomlawuli oyintloko kwinkosi.
Njengomlawuli olawulayo wesizwe, umongameli ulawula umgaqo-nkqubo welizwe langaphandle , ukwenza izivumelwano kunye neentlanga zangaphandle kunye nokumisela amanxusa kwezinye iintlanga nakwiZizwe eziManyeneyo kunye nomgaqo-nkqubo wekhaya , ukujongana nemiba e-United States kunye noqoqosho.
Ubeka kwakhona amalungu eKhabinethi , kunye neZigqeba zeNkundla eziPhakamileyo kunye nabagwebi bezemfundo.
UkuPhathwa kweMini ukuya kwiSuku
Umongameli, ngokuvunyelwa kweSeneti, ukhetha iKhabhinethi , ejongene neengqonge ezithile zikaRhulumente. Amalungu eKhabhinethi abandakanya - kodwa awanakunqunyulwa - umongameli wongameli , ummeli wezobuongameli we-US, ummeli wezorhwebo wase-US, kunye neentloko zazo zonke iindibano ezinkulu zeseburhulumenteni, njengabhala bombuso , ukukhusela , uNondyebo kunye ugqwetha jikelele , okhokela kwiSebe lezoBulungisa.
Umongameli, kunye neKhabinethi yakhe, unceda ukubeka ithoni kunye nomgaqo-nkqubo wegatsha lonke elilawulayo kunye nendlela imithetho yase-United States ifunyelwa ngayo.
Umongameli kulindeleke ukuba alungiselele iCongress epheleleyo ubuncinane kanye ngonyaka ukwenzela ingxelo kwi- State of Union . Nangona umongameli akanalo igunya lokumisela imithetho, usebenza neCongress ukuzisa umthetho omtsha kwaye uphethe amandla amaninzi, ngokukodwa ngamalungu eqela lakhe, ukuba angenelele kumthetho awawuthandayo. Ukuba iCongress kufuneka yenze umthetho owenzelwa umongameli, unokuyivusa umthetho ngaphambi kokuba abe ngumthetho. I-Congress ingaphaya i- veto kamongameli kunye nabangamashumi amabini anesithathu kwabangena kwi-Senate kunye neNdlu yabaMameli ngexesha elikhethiweyo.
Nkqubo welizwe langaphandle
UMongameli ugunyazisiweyo ukwenza iintsebenziswano kunye neentlanga zangaphandle, kuvumelekile kwiSenate. Ukwabela amanye amagosa nakwamanye amazwe nakwiZizwe eziManyeneyo , nangona ezo, nazo zifuna ukuqinisekiswa kweSenate. UMongameli kunye nolawulo lwakhe bamele iimfuno ze-United States phesheya; ngolo hlobo, uhlala edibana naye, uyamkela kwaye ahlakulele ubudlelwane namanye amagosa karhulumente.
UMlawuli oyiNtloko yeMkhosi
UMongameli ukhonza njengomlawuli wamagosa ekhosi. Ukongezelela kwamagunya akhe phezu komkhosi, umongameli unelungelo lokususa loo mabutho ngokuqonda kwakhe, ngokuvunyelwa kwebandla. Unokucela iCongress ukuba imemezele imfazwe kwezinye iintlanga.
Imivuzo kunye nePerks
Ukuba ngumongameli akukho ngaphandle kwayo. Umongameli ufumana i-400 000 zama-dollar ngonyaka kwaye, ngokwenene, igosa le-federal elihlawulwa kakhulu. Unokusetyenziswa kweendawo ezimbini zokuhlala, i-White House kunye neCamp David e-Maryland; Inombini yendiza, i-Air Force One, ne-helicopter, i-One One, ekulahleni kwayo; kwaye unemihlangano yabasebenzi kubandakanye nomcuphi ngokwakhe ukuba amncedise kwimisebenzi yakhe yobomi kunye nobucala.
Umsebenzi ngokuqinisekileyo awukho ngaphandle kweengozi .
Umongameli kunye nentsapho yakhe banikezwa ukhuselo olujikelezayo-kwi-Secret Service. UAbraham Lincoln wayengumongameli wokuqala wase-US ukuba abulawe; UJacob Garfield , uWilliam McKinley kunye noJohn F. Kennedy nabo babulawa ngoxa bekhona. U-Andrew Jackson , uHarry Truman , uGerald Ford kunye noRonald Reagan bonke basinda kwiimvavanyo zokubulala . AbaPhathiswa baqhubeka befumana ukhuseleko lweNkonzo yeMfihlo emva kokuba bathathe umhlalaphantsi kwiofisi.
I-Phaedra Trethan ngumlobi ozimelayo osebenza njengomhleli wekopi ye-Camden Courier-Post. Wayesebenzela i-Philadelphia Inquirer, apho ebhala ngeencwadi, inkolo, imidlalo, umculo, iifilimu kunye neevenkile.
Umyalelo oLawulayo 11085: UMongameli woMongameli weNkululeko
Imiba enomdla kunye neyona nto ibalulekileyo malunga noWilliam Henry Harrison
Inkqubo yokuThuthukiswa koRhulumente kwi-US
Uluhlu lwabaMongameli ababengamaMoni
I-Baroque Fugue: Imbali kunye nezoBantu
Isihlandlo seRussia Revolutions: 1918
Indlela yokubuyisela i-Walkover kwi-5 elula
Iintlobo zeeNqweno zeFlabathi zeBhola
Iingcebiso ezi-7 zeeKhaya zaseKhaya
Ubuzwe bezobupolitika kunye neNkcubeko
Ziziphi Ixesha leeMatriki?
Iigulane ze-Skate Wheel 101
Isingeniso kwi-Microscope ye-Electron
Imigaqo yezokuLondoloza kweLebhu yeeKhemistry
Imithandazo kuSt. Philip Neri yonke imihla yeveki
Yintoni Eyasetyenziselwa Ukwenza IPaint Imile kwiCanvas?
Ngubani owamngcwaba uGraham Crackers?
Abagqwiri kwi-Mythology naseNkolweni
Indlela yokuba yi-NFL esemthethweni
Imisebenzi yeBhola abaPhathi
Umda woKhenketho: Abenzi beeClubs zeBhola zeBaokaoka kunye nee-Exotics